Heartburn - Loza eo amin'ny tratra - aretina reflux
Heartburn Reflux Disease | Ny fisorohana ny fahasalamana
Nahoana no tsy mamono ny vavony intsony?
Inona ny soritr'aretina mahazatra?
Rahoviana aho no mila mankany amin'ny dokotera?
Fanafody ho toy ny trigger?
Firy no matin'ny homamiadana?
Betsaka no nahita ny sary teo aloha: olona iray toa mandrehitra afo, ary eo akaikin'io ilay lohateny hoe "Heartburn". Mazava ho azy fa sary ratsy iray, satria ny fireharehana, na dia eo aza ny anarany, dia tsy misy ifandraisany amin'ny afo na ny lelafo. Fa kosa, misy ny fahasosoran'ny membranes mitepeka ao amin'ny osea fiarovana ao ambadik'izany - fahatsapana hafahafa.
Heartburn - loza ao anaty tratra (aretin'ny reflux)
Saika ny olona rehetra no mahatsapa izany indraindray. Raha mbola misaraka amin'ny ora samihafa ny soritr'aretina mandritra ny ora maro na mandritra ny iray na roa andro, dia tsy misy zavatra tokony hatahorana. Ao amin'ny 10 hatramin'ny 15 isan-jaton'ireo voakasik'izany dia tsy mitsahatra ny mirehitra ao amin'ny tendany.
Heartburn - aretina reflux
Ao amin'izy ireo dia maloto mafy ny mucosa ka manjelatra izany. Ny aretina reflux izay lazaina amin'izany dia tsy maintsy atao amin'ny tranga tsirairay. Na dia tsy dia mampidi-doza loatra aza ny fiterahana marefo: amin'ny dingana avo lenta amin'ny aretina, tsy misy fitsaboana mety, olana goavana amin'ny fahasalamana - anisan'izany ny homamiadana.
Ireto valiny manaraka ireto izay fanontaniana manan-danja indrindra momba ny havokavoka dia manampy amin'ny fialana amin'ny ratsy.
Ahoana no ielezan'ny fijaliana?
Ny fototry ny ratsy dia ny jaky mity. Izy io dia manamboatra alikaola mialoha ny sakafo ary "mandany izany" amin'ny famarotana akanjo fotsy. Izy dia manatanteraka io asa io miaraka amin'ny fanampian'ny enzymes (pepsin) ary - izany dia toa hafahafa amin'ny voalohany - ampahany amin'ny asidra saline.
Asidra asidra ao amin'ny vatantsika? Tsy izany ve no mampidi-doza? Raha tsy misy ny juska any amin'ny toerana misy azy - ao amin'ny vavony. Na dia eo aza ny pH 1 na dia 3 - izay avo zato mahery kokoa noho ny vinaingitra - dia tsy mampisy fahasimbana ny fluid ao amin'ny areti-mifindra. Noho ny rafitra manokana, ny rindrin'ny vavony dia afaka mandefitra mora foana ity tontolo iainana ity.
Amin'ny ankapobeny, ny sphincter dia mitazona ny fifindrana eo amin'ny voankazo sy ny vavony mafy mba tsy hisy ny asidra dia mandositra amin'ny varavarankelin'ny vavony. Saingy mety ho voakitika noho ny antony samihafa ny asan'io hozatra io (jereo ny fanontaniana manaraka). Vokatr'izany, ny ao anaty vavony dia mivezivezy ao anaty voanjo ary malahelo ny moka. Mahavariana toy izany ny fireharehana.
Ilay sifotra, izay antsoina koa hoe "sphincter", izay manasitrana ny fidinan'ny vavony, dia mety ho tafintohina noho ny antony samihafa. Voalohany, tsy fahita firy ny fahanterana, izany no mahatonga ny valanaretina manomboka amin'ny 50. Matetika ny taonany dia mihamitombo. Matetika no mitranga izany amin'ny alina, satria matory bebe kokoa mandritra ny torimaso ny sphincter eo amin'ny atidoha sy ny vavony. Ankoatr'izay, ny fanodinkodinan'ny votoatin-tsakafo dia ankasitrahana rehefa mipetraka.
Amin'ny tranga hafa dia mitarika ny famindrana ny vavony ao amin'ny kibo ny fifindran'ny diapragmika. Mirefotra ny fihenjanana ary tsy mahomby intsony ny sphincter. Ao anatin'ny lavaka lehibe iray dia mihodina ao amin'ny pharynx ny ao anaty vavony indraindray.
Ny soritr'aretina mahatsiravina dia ny fanaintainana mahatsiravina sy mandoro ao amin'ny atody ambony. Ny fanaintainana indraindray dia mamiratra ao ambadiky ny taolam-paty. Ny fihadiana na fisotroana dia tsy manatsara ny fahatsapana. Saingy tsy fahatsapana io fahatsapana io. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fihenan'ny tsiranoka asidra amin'ny tendany voalohany dia tsy mampisy soritr'aretina mihitsy fa tena mamitaka tokoa izany. Raha hita ny soritr'aretina taty aoriana dia mety ho eo amin'ny dingana avo lenta ny aretina, izay mahatonga ny fitsaboana sarotra.
Inona avy ireo soritr'aretina maneso?
Ny gastric asidra ao amin'ny osea dia indraindray mahatonga soritr'aretina fa na ny marary na ny dokotera dia tsy mifanentana amin'ny fatotra. Matetika ny tanora no mitaraina noho ny fanaintainan'ny aretin-kibo. Raha voan'ny aretim-po ny dokotera avy eo, dia matetika no miteraka aretina ny olana.
Ny asidra ao amin'ny tendany koa dia mety hitarika amin'ny fampiasana kohaka na fihenam-bolo, izay mpitsabo matetika amin'ny fotoana voalohany dia midika fa miray tsikombakomba amin'ny soritr'aretina mangatsiaka na astera. Indraindray ireo olona mijaly dia mitatitra ny fahatsapan'ny vatana hafa any amin'ny kamboty.
Matetika no tsy misy antony tokony hiadian-kevitra ny mivalo sy mandoro ao amin'ny tendany. Amin'ny fitarainana tsy fahita firy dia tsy misy olona mankany amin'ny dokotera. Angamba nisy kafe be loatra, na sakafo matavy sy matavy be no antony. Ao amin'ny sakafo toy izany dia mamoaka asidra kokoa ny vavony. Ny fihetseham-po mampidi-doza ao amin'ny tendany matetika dia mandeha irery. Na izany aza, raha mitranga matetika ireo soritr'aretina - impiry isan-kerinandro - ny mpitsabo dia mila manatona dokotera. Olona iray izay mitepoka am-bavaka isan'andro isaky ny roa na telo herinandro dia hanome toro-marika iray hanamarina ny toetry ny fitsaboana.
Inona ny fitsaboana toy izany?
Eo amin'ny toerana voalohany, misy ny famerenana ny fahazarana. Sarobidy ve ny lanjany? Mivezivezy ampy ve aho? Maivana sy malemy no afaka mampitombo ny fireharehana. Mitandrema ihany koa rehefa misotro divay fotsy, siramamy ary matavy. Amin'ny toe-javatra misalasala dia tsara kokoa ny manao azy raha tsy izany. Toy izany koa ny kafe, ny dite mainty ary ny fisotroana karbôna. Ny sigara dia manimba satria ny nikotine dia mampihena ny salvage izay manala ny asidra baomba. Na dia mety hanampy aza ny fahazarana manimba, dia matetika dia tsy ampy izany. Ho an'ireny tranga ireny, dia misy fanafody haingana be izao.
Ho an'ny fahasalamana malefaka dia misy fanafody azo avy amin'ny asidra (azo ampiasaina: hydrotalcite, Algeldrat, magaldrate, carbonium aluminium aluminium) ary calcium sy carbony magnesium. Ny fikarakarana ranitidine na famotidine dia manakana ny fiorenan'ny asidra marefo. Raha voan'ny aretina ny vavony, dia miteraka fanafody mampitombo ny fery amin'ny felam-boninkazo, karaoke, glandiana sy mangidy mangidy. Amin'ny toe-javatra faran'izay henjana, ny dokotera dia mandefa fanafody avy amin'ny kilasin'ny fitaovana fanenonan'ny proton. Manafoana ny fampiroboroboana ny asidra indrindra izy ireo, saingy tsy miasa avy hatrany.
Ny mpitsabo sasany dia mahatonga ny hozatry ny sphincter misakafo amin'ny fidirana ao amin'ny vavony, manamora ny famerenana ny voka-tsoa ao amin'ny atidoha. Tafiditra ao anatin'izany ny asmahery manokana, ny fo sy ny fanafody fampidiran-dra. Mety hisy vokany ratsy ihany koa ny fanakanana ny fantsona kalsioma sasany sy ny antidepressants. Na izany aza, ny marary dia tsy tokony hanao izany raha tsy misy fanafody - izany no mety hisian'ny fandrahonana. Ny olona izay mijaly noho ny famonoana dia tokony hiresaka amin'ny dokotera aloha.
Tena ilaina ve ny fandidiana?
Raha tsy te haka fanafody ny olona iray voan'ny aretin-koditra, raha tsy miraharaha azy ireo izy na tsy misy fiantraikany aminy, dia matetika ny dokotera no afaka manampy amin'ny fandidiana. Ny fitrandrahana toy izany dia antsoina hoe "fundoplication". Ny mpitsabo ao amin'ny vatan'ny vavonin'ny vavony dia manamboatra volo, izay napetrak'izy ireo manodidina ny fifindran'ny otophagus mankany amin'ny vavony. Ny vokatra miteraka dia miteraka indray ny filalaovana fetsy. Ny ankamaroan'ny marary dia miaina tsy voavolavola aorian'ny fandidiana. Ankoatra ny fahasarotana mahazatra izay mety hanaraka fitsaboana (aretina, fanasitranana maratra mahatsiravina), ny fomba fiasa dia azo antoka (raha tanterahan'ny dokotera za-draharaha).
Ao amin'ny 10 isan-jaton'ny olona manana aretina reflux, dia misy fiovana mivonto amin'ny osefage. Ireo dia kanseran'ny vorona, dokotera miteny momba ny "aretin'i Barrett". Ny ankamaroan'ireo marary ireo dia voakasika, izay nahatonga ny aretina reflux ho tara loatra na efa tsy tsikaritra. Na dia amin'izany aza dia afaka mitondra fitsaboana tsara ny dokotera - raha toa ka mitatitra amin'ny fotoana mitaraina ny marary.
Tsy matetika izany, ka indraindray misy kanseran'ny tena mivoatra avy amin'ny mpanelanelana. Indraindray dia mitoetra ho voafetra ny fitomboana. Rehefa hita vao haingana ireo mpitsabo dia mahavita manala ireo sela homamiadana mampiasa fomba fiaina endoscopic. Zava-dehibe ny fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'ny mararin'ny marary aorian'ny fidirana an-tsehatra. Raha mahomby, dia vitsy dia vitsy ny fahasarotana.
Medicine Cabinet & Medicine Cabinet | Ny fisorohana ny fahasalamana
Mibanjina ny toetrandro | Ny fisorohana ny fahasalamana
Ny bibikely mitefoka | Ny fisorohana ny fahasalamana
Boreout | Ny fisorohana ny fahasalamana
Home remedies | Ny fisorohana ny fahasalamana
Iron deficiency | Ny fisorohana ny fahasalamana
Zana-tsokajy mena midorehitra | Health medicine